‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर जनताले नारा लगाउन थालिसके – News Portal of Global Nepali
11:44 AM | 4:29 PM
‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर जनताले नारा लगाउन थालिसके
21st June 2018 मा प्रकाशित
गंगा विक, केन्द्रीय सदस्य राप्रपा
सामाजिक संस्था खोलेर समाज परिवर्तनको अभियानमा होमिएकी गंगा विक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीले उनलाई उत्पीडित दलितको संगठन हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । राजाको शासनकालमा कामना–२६ वडाको निर्वाचित अध्यक्षसमेत भएकी गंगा यतिबेला जागरण समूह सञ्चालन गरेर उत्पीडित महिलालाई आत्मनिर्भरको बाटो देखाइरहेकी छन् । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा गंगासँग कुमार राउतले गरेको कुराकानी :
० जागरण समूहले के गर्छ ?
– महिलाहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ कि भनेर हामीले यो संस्था स्थापना गरेका हौं । महिला दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामी विभिन्न किसिमको तालिम सञ्चालन गछौं । म रानीबारी महिला समाजको पूर्वअध्यक्ष हुँ ।
० महिला समाजले चाहिँ के गर्छ ?
– विकास र समाज सेवामा टेवा पुगोस् भनेर हामीले महिला समाज गठन गरेका हौं । सरसफाइ र स्थानीय प्रशासनलाई विकासमा दबाब सिर्जना गर्छाैं । पीडित महिलाको उद्धारमा सहयोग गर्छाैं । हरेक गतिविधिमा गंगा दिदी चाहिन्छ भन्छन्, मेरो जयजयकार नै गर्छन् ।
० के त्यस्तो काम गर्नुभएको छ ?
– विशेष गरी उत्पीडित महिला दिदीबहिनीका लागि काम गरेकी छु । त्यस्तै, विकास निर्माण र अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग उपलब्ध गराउँछु । समाजसेवामार्फत राजनीतिमा संलग्न छु । अधिकार मागेर पाइँदैन, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने सचेतना फैलाउँछु ।
० समाजसेवा गर्नलाई संस्था नै चाहिने रहेछ ?
– जुनसुकै काम गर्न संगठित आवाजको आवश्यकता पर्छ । संस्थामार्फत संगठित हुन सजिलो हुन्छ । नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्था खोलेको होइन, यो समाज र देशलाई केही दिन सकिन्छ भनेर हामीले संस्था स्थापना गरेका हौं ।
० यो संस्थामा दलित महिला मात्र अटाएका छन् ?
– होइन, जातविशेषको यो संस्था होइन, विचार मिल्नेहरूको समूह हो । समाजमा केही गर्छु भन्ने चाहना बोकेका दिदीबहिनीलाई संस्थाले समेटेको छ । महिला दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर हुने बाटो देखाउँछौं । काठमाडौंमा मात्र होइन, ७७ रै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने सोच बनाएका छौं ।
० कस्ता महिलाले सेवा पाउँछन् ?
– घरपरिवारले अन्यायमा पारेका, अंश नदिई घरबाट निकालिएका महिलाको पक्षमा हामी बोल्छौं । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने बाटो देखाउँछौं ।
० तपाईं काठमाडौंको रैथाने ?
– अहिले चाहिँ हो, जन्म चाहिँ नुवाकोटको दुर्गम गाउँमा भएको हो । पढाइ लेखाइ पनि गाउँमै भयो । विवाहपछि काठमाडौं आएका हौं ।
० त्यो बेला पढाउने चलन थियो ?
– बुवा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, राजधानी नजिक भए पनि हामी बस्ने ठाउँ दुर्गम थियो । पञ्चायतले स्कुल खोलेर छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भनेको थियो । त्यसैले मैले पढ्न पाएँ । तर ९ कक्षा पढ्दापढ्दै विवाह भयो । त्यसपछि पढाइमा फुलिस्टप लाग्यो ।
० कहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
– यो त्यस्तै २०२७–०२८ सालतिरको कुरो हो । विवाहपछि बालबच्चा भए, हुर्काउन थालियो । सन्तान हुर्किएपछि राजनीतिमा संलग्न भइयो ।
० सानैमा विवाह भएछ ?
– होइन, विवाह हुँदा म २२ वर्षकी थिएँ । स्कुल टाढा भएकाले सानोमा जान सकिएन, ठूलै भएपछि गइयो । असल केटो माग्न आयो भनेर बुवाले विवाह गर्दिनुभो । पढेको केटीलाई पढेकै केटा आयो भनेर मेरो विवाह गर्दिनुभयो ।
० केटो असलै रहेछ ?
– असल नै भन्नुपर्छ, जीवन उहाँसँगै चल्यो । सन्तान हुर्किए । सानो छोराको विवाह गर्न बाँकी छ, बाँकी सबै आ–आफ्नो गरेर खाएका छन् ।
० श्रीमान् के गर्नुहुन्छ ?
– गाडीको मिस्त्री हुनुहुन्छ । अहिले जेठो छोरा पनि मिस्त्री नै हो । छोरीहरूको विवाह भइसक्यो । सानो छोरा संगीतमा चासो राख्छ ।
० कुन राजनीति दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
– म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा दलित संगठनको उपाध्यक्ष हुँ ।
० कुन राप्रपा ?
– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटै छ । चुनाव चिह्न गाई हो, जसको अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ ।
० फुटेर तीनवटा बनेको छ होइन ?
– फुटेर होइन, चोइटेर दुईवटा समूह गएका छन्, फेरि जोडिने चाँजोपाँचो मिल्दैछ । छिट्टै जोडिन्छ होला ।
० जोडिने भए किन चोइटेका रहेछन् ?
– पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास थियो, उहाँहरू सफल हुनुभएन । हाम्रो एजेन्डामा उहाँहरूले नेतृत्व खोजेपछि कुरा मिलेन । अन्ततः हाम्रै एजेन्डा लगेर गए । के के गरौंला भन्थे, गर्न सकेनन् । त्यसैले अब फुटेर होइन, जुटेर जाँदा सफल हुन्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भयो ।
० पार्टीले दलित समुदायलाई उचित स्थान दिएको छ ?
– असन्तुष्टि प्रायः छैन । पद चाहियो भनेर माग्न गइएको छैन । म निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ ।
० पार्टी सरकारमा गएका बेला सहयोग भएन ?
– अध्यक्षज्यूले सहयोग गर्छु भनेर धेरै स्थानमा भाषण त गर्नुभयो, त्यसो त उहाँ सरकारमा धेरै बस्न पाउनु पनि भएन ।
० राप्रपाबाटै किन राजनीति गर्नुभयो ?
– सिद्धान्त र एजेन्डा मात्र होइन, मातृभूमिको रक्षा गर्ने राप्रपा मात्र एउटा राजनीतिक दल हो । हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र हाम्रो एजेन्डा हो । कांगे्रस र कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी मेरो दिमागमै आउँदैन ।
० राजा फेरि राजदरबार फर्किएलान् ?
– फर्किनुपर्छ, आवश्यक भइसक्यो । राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जनताले नारा लगाउन थालिसके । नेपाल र नेपाली जनताको रक्षा राजाबाट मात्र सम्भव छ ।
० गुनासा छैनन् ?
– दलित महिला जागरण समूहलाई राज्यले पनि हेरोस् भन्न चाहन्छु । हामी महिला दिदीबहिनीकै सेवामा जुटेका छौं । यस्तो संस्थालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
बेलायतमा कोरोना संक्रमित मध्य २२ प्रतिशतमा मात्र लक्षण
डब्लुएचओबाट अमेरिका औपचारिकरुपमा बाहिरिदै
नेकपा स्थायी समितिको बैठक पुनः स्थगित
९५७५	पटक पढिएको
८६२२	पटक पढिएको